Yakka Ajjeechaa fi madoo Humni Nafxanya Goojjam Irraa bobba’e Oromoo irraa geessise – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooYakka Ajjeechaa fi madoo Humni Nafxanya Goojjam Irraa bobba’e Oromoo irraa geessise
Yakka Ajjeechaa fi madoo Humni Nafxanya Goojjam Irraa bobba’e Oromoota naannoo Giddaa Ayyaanaa jiraatan irraan geessise.
Guraandhala 19, 2021
Kanneen guyyaa kaleessaa wallagga bahaa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa lalistuu anger ykn mender 10 goojjameen fi gumuz wal taatee oromoo lolteen kanneen wareegaman:
1- Zalaalem Fiqaaduu
2- Margaa Fiqaaduu
3- Jamanaa Waxxeessaa
4- Baqqalaa Fayyisaa
5- Daani’eel Daaqaa
Kanneen armaan olitti jiran Kan rasaasaan ajjeefaman dha.
Maqaan isaanii fi suuraan isaanii armaan gaditti Warri barreeffaman kanneen rasaasa jaraan madahaanii hospitaala riferaala yuuniiversiitii wallaggaa ciisaa jiran dha.Isaan keessaa obbo Mokonnon Olaanii hospitaala speeshaalaayizdiitti ciisee wal’aanamaa jira.
1- Xilaahun Tamiree
2- Derejjee Mekonnin
3- Mekonnin Olaanii
4- Gazzaaheny Yaadattaa
5- Daawwiit Fedhasaa
6- Roobee Xureessaa faa dha.
1. #Gaafa jijjiirama jedhanii namoonni hedduun sobaman sana ABOn hin sobamne.
2. #Ummata keenyatuu nu hubachuu dadhabee sobamee malee EPRDFn iijjiiramni dhufu hin turre, EPRDF nama ajjeesaa bahe santuu Guyyuma tokkoon as bahee jijjiramneerraa reform goona jedhee as bahe.
3. #Ummanni hanga nu hubatutti jenneeti malee nuuf Fulbaana 30, 2013 booda Mootummaan sirnaa kan filmaata gaggeessu hin jiru;Mirgallee itti hin qabu.
4. #Mootummaa dha kan ofiin jedhu kan humnaan jiraateef, ummanni waan nu hin hubanneef nullee hanga ummanni nu hubatuuf wajjiin Mootummaa dha jenne malee, akka mootummaan hin jirre labsinee turre.
5. #Filmaatas gaggeessuu hin danda’u, Akki itti hin gaggeesine ammoo Nageenyi guutumatti kennataa miti. Yoo tarii sochiidhuma fafakkeessaa Boordii Filannoo warra sirna Ethiopia sana tiksuuf harka wal qabatanii dhugaa jiru haalanii itti deemuun Waraqaadhuma qabatanii waa goggodhaniii kunoo ebalu fa’allee filame jedhanii yoo nuuf labsan malee. Filmaatni dhugaa kan ummata hiriirsuun taasisanii as baasan hin iiraatu.
6. #Mootummaan dandeettii hin qabne, Kan caasaan isaa burkutaawee jiru nageenya buusuu dadhabee ofiiyyuu bututee jiru keessatti darbee ibida lolaa kallattii hundaan qabsiise keessaa akkaataa itti bahuullee kan hin beekne, keessatyuu rakkinni Polotikaa tasgabbii akka hin arganne warri dantaa qaban osoo jiranii isa kana irraa filmaata eeguun hin danda’amu.
7. #Karaa tokkoon Mootummaa Ceehumsaa Biyyaalessaa Oromiyaa(#MCBO) jechaa karaa tokkoon ammoo Filannoo jechuun kun wali hin faallessuu isa jetteef, #Biyyumatuu waan wal faallessaa dha; #Mootummichumatuu waan wal faallessaa dha.
8. #Waan faallessaa isaan lafabirratti diriirsan keessatti, Qabsicha jiraachisuuf ammoo nuti ijibbaata isa dhumaa gochuuf keessa jirra.
9. #Ammallee ummata keenyatti kan himnu mootummaan sirnaawaa fi seerawaan hin jiru.
10. #ABO fi #KFOn Jaarmiyaalee siyaasaa lama kanneen sagantaa siyaasaa garaagarummaa xixinnaa qabu dhimma ummata keenyaa irratti ejjannoo tokko qabnuu dha.
11. #ABO fi #KFOn Waliin jireenyii fi walitti dhufeenyi keenya itti ulfaannaan #Biltsiginnaan dhiibbaa Jaarmiyaalee siyaasaa keenya irratti taasisaa jiru; Dantaa lammiilee Oromiyaa akka galmaan geenyu waan beekaniif ni kufana jedhanii of sodaatu.
12. #Ejjannoon ABO fi KFO tokkuma garaagarummaan qabnu hin jiru.
13. #Lammiileen hundi nagaha dhabanii jiru, kun furmaata argaachuu kanndanda’u #MCBO galiin gahachuu dha;Kana hin godhan taanaan badii guddatuu as deemuuf jira.”
Haasawa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa ONN irratti dubbatan keessaa kan fudhatame.